साहित्य Archives - Page2of7- तितोपाटी
महामहिम राष्ट्रपति ज्यूलाई कुवेतबाट पत्र
श्रीमान महामहिम राष्ट्रपति ज्यू, कुवेतको खाडीबाट अभिबादन। महोदय, पत्र कहाँबाट शुरु गरौ, अन्यौलमै छु, किनकी सामाजिक सन्जाल देखी नेपाली मिडियाहरुमा तपाईंकै चर्चा चलिरहेकै छन।म जय नारायण माझि थारु एउटा साधारण देश भक्ति भावनाले ओतप्रोत भएको तराइ मुलको युबा हुँ।अहिले नेपालमा रोजगारी नपाएर आफ्नो घर-परिवार,छोराछोरीलाई पालन पोषण गर्न र उचित शिक्षा-दिक्षा…
कुवेतमा १०९ अाैं लक्ष्मी जयन्ती भब्यताका साथ मनाइयो
तितोपाटी - अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाज कुवेत शाखाको आयोजनामा १०९ अाैं लक्ष्मी प्रसाद देबकोटाको जन्म जयन्ती तथा रचना वाचन कार्यक्रम कुवेतको जिलिब स्थित पपिन्स हलमा आज भब्यताका साथ सम्पन्न भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाज कुवेत शाखाको अध्यक्ष हिमाल अन्जान यात्रीको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाली राजदुतावास कुवेतका प्रथम सचिब भोगेन्द्र लिङ्देन…
माया ठकुरी - ढोकाको घण्टी बज्नासाथ पढ्दै गरेको पत्रिका त्यही बैठक कोठाको टेबलमा राखेर हतपत उठेर ढोकाको छेउँमा पुगेकी थिइन् अप्सरा । घण्टी फेरि बज्यो। अप्सराले ढोकामा भएको सानो प्वालबाट बाहिर हेरिन् । बाहिर दुवै हातमा झोला झुण्ड्याएर उभिएका थिए मनोरञ्जन । मनोरञ्जनलाई देखेपछि ढोका खोलिदिएकी थिइन् अप्सराले। “ढोका खोल्न किन…
नारायण प्रसाद पोख्रेल - एउटा गाउँमा गरिब बाबुआमाका ३ सन्तान थिए । पहिलो सन्तान छोरा ,उ पछिको छोरी र कान्छो सन्तान छोरा । अभावले गर्दा जेठो छोरा र छोरीले ५ कक्षा भन्दा बढी पढ्न पाएनन । छोरीको सानै उमेरमा बिहे गरिदिए। जेठो छोराको जोडबलले कान्छोले पढाई लेखाई गर्ने मौका पायो…
अनेसास कुवेतले नोभेम्बर २ तारिकका दिन १०९ अाैं लक्ष्मी जयन्ति मनाउने
तितोपाटी - अनेसास कुवेत च्याप्टरले १०९ औं लक्ष्मी जयन्ति अागामी २ नोभेम्बर २०१८ शुक्रबारका दिन एक साहित्यीक कार्यक्रम गरि मनाउने भएको छ । कुवेतको जलिब अल शुयोख स्थित पपिन्स हलमा मिति २०७५ कार्तिक १६ गते तद अनुसार 2018 नोभेम्बर2तारीख शुक्रबारको दिन गजल कविता मुक्तक वाचन गर्दै १०९ औं लक्ष्मी…
-मनिष अम्गार्इं प्रिय जिन्दगी, आज तिमीलार्इ सम्झेर केहि कुरा गर्न मन लागेको छ । हुन त तिमी सम्बोधन अलि आत्मियता लागेन मलार्इ त्यसैले तँ भनेर सम्बोधन गर्छु। हुन त तँलार्इ कहिले पनि सम्झिन्न भन्छु सम्झिन पर्छ। यो बाध्यता हो कि नियति हो, तेरो नाममा मैले धेरै गल्ती गरेको छु केही…
एउटा पुरूषको कथाः ‘म किन याैनकर्मीकहाँ धाउन थालें’
बीबीसी - त्यो अविस्मरणीय रात थियो। अट्ठाइस वर्षमा पहिलो पटक मैले कुनै महिलालाई स्पर्श गरेको थिएँ। मेरो इच्छा पूरा भइरहेको थियो। त्यसैले म प्रसन्न थिएँ। त्यो अनुभव एक हप्तासम्म मेरो मस्तिष्कमा रहिरह्यो। म बेग्लै संसारमा भएको जस्तो अनुभव भइरहेको थियो। नहोस् पनि किन? अहिलेसम्म मेरो बिहे भएको छैन। मेरो गृहनगर गुजरातमा पुरुषको…
मिलेको थियो जीवन,कसैको काम आउनको लागि , तर समय बितिरहेको छ , कागजको टुक्रा कमाउनको लागि !!! के गर्नु हुन्छ , यति धेरै पैसा कमाएर, न कात्रो ओडाउने कपडामा झोला हुन्छ , न त मुर्दा गाड्ने ठाउँमा दराज !! मृत्यु दिने यमदुतहरु पनि घुस पनि लिदैनन् , ईश्वरको प्रेमलाई जोगाएर…
गजल सबैमा छाओस् खुसीको लहर,यो साल दशैँमा । कसैको लागि नबनोस् कहर , यो साल दशैँमा ।। पुकारौं दुर्गा मातालाई हामी ,सबैजना मिलेर । भक्तिले पूजा गरौं हर प्रहर , यो साल दशैँमा ।। परदेशिएका सबै दाजु भाइ , दिदी र बहिनी । आऊ गरौं पूरा मनका रहर ,यो साल…
कथाः एउटा पागल मानिस
नारायण पोख्रेल - सधै जसो त्यो मानिस हाम्रो गाउँको गल्लीमा फत्फताई रहन्छ । जिङ्ग्रिङ्ग परेको दारी र कपाल, ठाउँठाउँमा च्यात्तिएको अनि कट्कटी परेको यकदमै मैलो खैरो रङ्गको कमिज र रङ्ग छुट्याउन नसकिने हाप पाइन्ट लगाएको दुब्लो पातलो शरीर । खैकुन्नी के के बोलिरहन्छ कुनै शब्द बुज्न नसकिने । उसको उमेर ठ्याक्कै…